Mune Zera reInternet Vatengi Havagoni Kuregererwa | Martech Zone
Mune Zera reInternet Vatengi Havagoni Kuregererwa
China, Kukadzi 4, 2010 Mugovera, Mbudzi 28, 2015 Lorraine Bhora
Makore makumi maviri neshanu apfuura, makambani akapa akakundikana kurarama zvinoenderana nekutarisira kwevatengi anowanzo gamuchira tsamba yakatsamwa kubva kumutengi. Dhipatimendi ravo revashandi vevatengi vanogona kufuratira tsamba, uye ndipo panoperera nyaya.
Mutengi anogona kuudza vashoma shamwari. Kune chikamu chikuru, makambani makuru sendege anogona kutiza nekuendesa zvisina kunaka basa. Sevatengi, takanga tisina simba rekuvabata.
Asi nekuuya kwenzvimbo dzekudyidzana, mabhodhi ehurukuro, Twitter, uye Youtube matafura achinja. Vhidhiyo iri pazasi ndeimwe yemienzaniso yangu yandaifarira yemutengi anoshandisa simba rake. United Airlines yakakuvadza gitare raDave Carroll Mushure memwedzi mipfumbamwe yekutsvaga muripo, akasiya. Akanyora rwiyo uye akagadzira vhidhiyo yakaonekwa kanopfuura mamirioni makumi manomwe nenomwe. Nezviyero makumi mana nezvisere nemakumi maviri neshanu akange achikwanisa kusvika shamwari dzinopfuura shoma, achiratidza shanduko muyero yesimba kumutengi.
Uku ndiko kushamwaridzana paruzhinji husiku kune iyo ndege, pasina nzira yekuimisa. Pamusoro peiyo vhidhiyo, ini ndawana zvinopfuura makumi manomwe ezviuru zvinyorwa zvinyorwa uye zvinongedzo mumablog mablog uye enhau masaiti kusanganisira iyo Huffington Post ku NY Times,
'Saka United Airlines inofanira kuitei? Ko kambani hombe inoshandisa sei vezvenhau kupindura? Pakangoburitswa vhidhiyo iyo $ 1,200 ingadai yakaita kuti dambudziko ripere mwedzi mitanhatu yapfuura, yakanga isina kukwana. Sekutsanangura kunoita Mr. Carroll: Ndanga ndaitwa ndakatsamwa kwenguva yakati rebei uye, kana paine chinhu, ndinofanira kutenda United. Vakandipa yekugadzira yekudyira iyo yakaunza vanhu pamwechete kubva kutenderera pasirese.
Nenzira, chete akabudirira zvine mwero semuimbi, rwiyo rwacho rwashandura Mr. Carroll kuita kubudirira kwehusiku, nebasa rakavimbiswa kutaura nemapoka nezve basa revatengi.
Tags: dave carrollevanhu vezvenhaubatanandege dzakabatanakubatana kunotyora magitare
Nei Google Doe $ isingatarisi
Kusava nyore ndiyo kiyi yehupenyu hunobudirira